मोटरसाइकल मर्मतका साधारण उपाय | गृहपृष्ठ
As of 2018-06-25 13:53:16
ADBL 314 (740) (0)
AHPC 159 (772) (1)
AKPL 278 (109) (-4)
ALICL 670 (287) (-20)
API 293 (1356) (-5)
BARUN 150 (10) (-3)
BNT 5916 (10) (116)
BOKL 264 (560) (-6)
BPCL 440 (2990) (-9)
CBBL 893 (178) (2)
CBL 151 (11562) (-1)
CCBL 165 (14237) (-1)
CHCL 750 (2224) (-10)
CHL 145 (10) (0)
CLBSL 740 (10) (-4)
CORBL 104 (100) (-4)
CZBIL 237 (18966) (-7)
DBBL 134 (1892) (2)
DDBL 744 (108) (0)
DHPL 110 (30) (0)
EBL 671 (2503) (-4)
EBLCP 623 (24) (0)
EIC 1355 (10) (-15)
FMDBL 545 (475) (-6)
FOWAD 2207 (80) (-28)
GBBL 179 (1243) (-1)
GBIME 287 (4923) (-2)
GBLBS 608 (3506) (1)
GDBL 190 (4113) (-1)
GFCL 126 (4060) (-2)
GIMES1 8.5 (5000) (0)
GLICL 865 (482) (-20)
GMFIL 130 (50) (1)
GUFL 110 (110) (4)
HBL 548 (310) (-10)
HDL 1279 (10) (-26)
HGI 451 (131) (-3)
HIDCL 154 (2936) (-5)
HPPL 292 (110) (-2)
IGI 910 (210) (-1)
JBBL 136 (1123) (0)
JBNL 153 (16333) (-3)
JEFL 102 (480) (-6)
JSLBB 3000 (54) (-64)
KADBL 188 (727) (-1)
KBBL 224 (400) (0)
KBL 210 (6336) (-1)
KEBL 219 (20) (-8)
KKHC 112 (20) (2)
KMFL 1669 (20) (0)
KNBL 124 (100) (2)
KRBL 117 (63) (0)
KSBBL 154 (1489) (2)
LBBL 146 (3548) (-2)
LBL 249 (9041) (-7)
LICN 1605 (50) (-4)
LLBS 1078 (300) (-22)
MBL 209 (705) (1)
MDB 284 (475) (0)
MEGA 175 (17433) (-3)
MEGAPO 110 (13246) (0)
MERO 1041 (87) (-5)
MFIL 127 (60) (3)
MLBL 171 (1432) (1)
MMFDB 1580 (72) (-20)
MNBBL 378 (701) (-2)
MSLB 2640 (425) (-40)
NABIL 938 (3260) (-4)
NABILP 726 (2280) (-4)
NBB 209 (4860) (-3)
NBBL 2530 (176) (-45)
NBL 292 (10003) (-6)
NCCB 235 (6712) (-3)
NCDB 111 (3113) (-11)
NEF 8.7 (1449) (-0.15)
NGPL 169 (133) (-7)
NHDL 201 (30) (3)
NHPC 85 (1000) (-1)
NIB 621 (3437) (-1)
NIBPO 542 (300) (-10)
NIBSF1 10.7 (4500) (-0.21)
NICA 315 (2161) (-1)
NICL 650 (220) (-10)
NIL 551 (914) (-10)
NLG 880 (2154) (-10)
NLIC 1008 (1914) (-6)
NLICL 1200 (2159) (-35)
NMB 348 (2391) (-1)
NMBHF1 9.12 (10000) (0)
NMBMF 1408 (10) (-22)
NMBSF1 11.55 (4000) (-0.05)
NMFBS 2186 (60) (-64)
NSEWA 327 (10) (15)
NTC 724 (540) (-2)
NUBL 1095 (757) (-6)
ODBL 176 (506) (2)
PCBL 289 (4661) (-1)
PFL 135 (451) (3)
PIC 1150 (752) (-30)
PICL 790 (415) (4)
PLIC 558 (2896) (-9)
PRIN 510 (1095) (-5)
PRVU 192 (4253) (1)
PURBL 174 (696) (-2)
RADHI 230 (2961) (2)
RBCL 11000 (140) (-100)
RBCLPO 10000 (200) (-151)
RHPC 124 (32) (0)
RLFL 123 (141) (0)
RMDC 660 (74) (-1)
RSDC 544 (203) (0)
SADBL 151 (2772) (-1)
SANIMA 326 (6625) (-4)
SBI 499 (11993) (-1)
SBL 302 (7110) (-7)
SCB 748 (4414) (-3)
SDESI 1664 (585) (-36)
SEF 9.05 (1200) (0.07)
SFFIL 227 (1) (-4)
SHINE 270 (540) (2)
SHPC 333 (90) (0)
SICL 963 (1958) (-7)
SINDU 130 (398) (0)
SKBBL 1160 (521) (14)
SKDBL 120 (164) (0)
SLBBL 1632 (410) (-18)
SLBS 1600 (110) (1)
SLICL 678 (2993) (-1)
SMATA 2107 (1654) (-18)
SMFDB 970 (160) (-15)
SPDL 126 (248) (1)
SRBL 220 (1867) (-5)
SWBBL 1225 (1580) (-25)
TNBL 175 (386) (0)
UMB 1994 (400) (-29)
UMHL 168 (150) (0)
VLBS 766 (412) (-15)
WMBF 110 (200) (1)
WOMI 1400 (125) (-28)
Home यातायात मोटरसाइकल मर्मतका साधारण उपाय
यातायात 577 views
मोटरसाइकल मर्मतका साधारण उपाय
यात्रा गर्न नरुचाउने मानिस बिरलै भेटिन्छन् । झन् खुला रूपमा यात्रा गर्न चाहनेका लागि त मोटरसाइकलको विकल्प नहुन सक्छ । रमाइलो गर्ने सोचले मोटरसाइकल यात्रामा निस्केको बेला मोटरसाइकल बिग्रियो भने बर्बाद नै हुन्छ । आधारभूत मर्मत गर्ने शीप भएन भने सानो समस्याले पनि मोटरसाइकल स्टार्ट नै गर्न नसक्ने हुन्छौं । मेशिन भएकाले साधारण गडबडी हुँदासमेत यसले कार्य गर्न छोड्नु स्वाभाविक नै हो ।
नयाँ जमानाका मोटरसाइकलमा झन् जटिल प्रविधिको प्रयोग गरिएको हुन्छ । हतपत्त नबिग्रने खालका यी मोटरसाइकल बिग्रिहालेमा भने मेकानिक्सकोमा लैजानु वा उनीहरूलाई बिग्रिएको स्थानमै बोलाउनुको विकल्प रहँदैन । तर पनि केही यस्ता उपाय छन्, जसलाई अवलम्बन गर्नाले आफैले समेत सवारीको चेकजाँच तथा साधारण मर्मत गर्न सकिन्छ । यही सोचका साथ मर्मत गर्न सघाउने सोचका साथ यहाँ केही साधारण उपाय प्रस्तुत गरिएका छन् :
चेकजाँचका आधारभूत सामग्री
मोटरसाइकलको इञ्जिन चल्न तीन तत्त्वको आवश्यकता पर्दछ । ती हुन् इन्धन, बिजुली र हावा । सर्वप्रथम आफ्नो सवारीले यी तत्त्व पाए/नपाएको जाँच्नु आवश्यक हुन्छ । यिनको जाँच राम्ररी गरी साधारण मर्मतले पनि तिनलाई पुनः सुचारु गर्न सकिन्छ ।
इन्धन भरेको समय र आफ्नो सवारीको माइलेजबारे चालकले सधंै ध्यान दिनु आवश्यक छ । तेल सकिएर मोटरसाइकल बन्द हुनु पहिलो समस्याका रूपमा रहेको छ । यदि त्यसो हो भने तपाईंको मोटरसाइकलमा पेटकक छ भने त्यसलाई रिजर्भमा हाल्नुहोस् । केही चालकले बिर्सेर वा थाहा नपाएर फ्युल अफ गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । शुरूशुरूमा त कतिपयले आफ्नो मोटरसाइकलमा यो सुविधा छ भन्नेसमेत थाहा पाएका हुँदैनन् ।
मोटरसाइकलमा तेल त छ, तर त्यो इञ्जिनसम्म पुग्न सकेको छैन भने सर्वप्रथम ब्लक्डलाइन सफा गर्न लाग्नुपर्छ । अधिकांश समयमा तापले गर्दा हावाको फोका पैदा हुने र यही नै रोकावटको कारण बन्ने गरेको पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा केही नगरीकनै पनि समाधान हुने गर्दछ । मोटरसाइकललाई चिसो हुने मौका दिएमा फोका हट्ने हुँदा केही समयपश्चात् मोटरसाइकल पुनः चलाउन सकिन्छ ।
मोटरसाइकल रोकिएपश्चात् हेर्नुपर्ने दोस्रो स्थान हो, फ्युजबक्स । कतै त्यो जलेको त छैन ? एकपटक जाँची हेर्नुहोस् । यो समग्र मोटरसाइकलकै विद्युतीय मिलन केन्द्र हो । यो जलेमा वा पग्लिएमा मेकानिक्सलाई बोलाउनुपर्छ । फ्युज सजिलै नजल्ने किसिमले निर्माण गरिएको हुन्छ । त्यसैले, त्यो पड्केको वा लूज भए÷नभएकोबारे जाँच्नुपर्दछ । फ्युज पड्किनु वा लूज हुनु खासै ठूलो समस्या होइन । यस्तो अवस्थालाई ध्यानमा राखी केही निर्माता कम्पनीले मोटरसाइकलमा अतिरिक्त एक–दुईओटा फ्युजसमेत राखेका हुन्छन् । तर, त्यो उपलब्ध नभएमा तुलनात्मक हिसाबले कम आवश्यक उपकरणमा जडित फ्युज, जस्तै– र्‍याडिएटर फ्यानमा रहेको फ्युज निकाली प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, यसो गर्दा ओभर हिटिङको समस्या आउन सक्ने हुँदा अतिरिक्त सावधानी भने अपनाउनुपर्छ ।
त्यस्तै, स्टार्टर बटन थिच्दा सवारीमा केही प्रतिक्रिया नदेखिए ब्याट्रीको अवस्था र कनेक्शन ठीक रहे÷नरहेकोबारे जाँचु गर्नु राम्रो हुन्छ । ग्राउण्ड वायर चुँडिएको अवस्थामा अन्य कण्डक्टरको प्रयोग गरी तिनलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, ब्याट्रीले राम्ररी काम गरिरहेको भए स्पार्क चेक गर्नुपर्छ । यसका लागि आफ्नो मोटरसाइकलमा रहेको स्पार्कप्लग रेञ्चको प्रयोग गरी प्लग निकाल्नुपर्छ । प्लग निकालेपछि स्पार्कप्लगको तार पुनः जडान गर्ने र यसलाई प्लगको प्वालनजिक लगेर राख्नुपर्छ । प्लगमा रहेको मेटल भागले इञ्जिनको कुनै मेटल भागसँग सम्पर्क गराउनुपर्छ । अब इञ्जिन सञ्चालन गरी झिल्का आए/नआएको अवलोकन गर्नुपर्छ । तर, झिल्का नआएमा वा अतिरिक्त स्पार्कप्लग नभएकोे अवस्थामा भने मेकानिक्सलाई बोलाउनु वा मोटरसाइकललाई मेकानिक्सकोमा लैजानु आवश्यक हुन्छ ।
तेल र विद्युत्पछि हावाको जाँच गर्नुपर्दछ । मोटरसाइकलको एयर फिल्टर जाम भए इञ्जिनले हावा पास गर्न सक्दैन । त्यसैले, समयसमयमा एयर फिल्टरको सफाइ गर्नु आवश्यक हुन्छ । मोटरसाइकलको सर्भिसिङ निर्धारित समयमै राम्ररी गरेमा यो समस्याबाट जोगिन सकिन्छ ।
यद्यपि, सवारीको हरेक समस्याको समाधान नियमित हेरचाह (मेण्टिनेन्स) नै हो । केही समस्या दोहोरिन्छ भने यसको मतलब मोटरसाइकललाई मर्मतको आवश्यकता परेको छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।
सवारी लाइसेन्सको आवेदन बन्द
२९ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०९:०५
इटहरीमा यामाहा एफजी २५ ‘राइड आउट’
२९ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०९:०४
लाइसेन्सको जानकारी एसएमएसबाटै
२९ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०९:०२
सदरमुकामकै पक्की सडक भासियो
बेलायतमा यूरोपेली लगानी आधा घट्यो : सर्वेक्षण
०.५४ प्रतिशतले घट्यो नेप्से (१ बजेको अपडेट)
कामना सेवाको ११ औं वार्षिक साधारण सभा
१२१८.२९ विन्दुमा नेप्से (१२ बजेको अपडेट)
केही खरदार र सुब्बासरहका कर्मचारीमात्र अपुग, प्रादेशिक लोक सेवा चाँडै
नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्ड पहिरोले अवरुद्ध
नकआउट पुग्ने सम्भावना कसको बाँकी छ, को घर फर्कियो ?
मोटरबाटो निर्माणको कार्ययोजना स्वीकृत
पञ्चकन्या समूह : निर्माण सामग्रीमै विशिष्टीकृत
कुन–कुन टीम समूहको अन्तिम खेल नखेल्दै नकआउट चरण पुगे ?